ကျနော် ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ဆို့ပြီး ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းခဲ့စဉ်က ပြုစုကုသပေးခဲ့ကြသူများ၊ အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြသူများ၊ ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ အကူအညီပေး သတင်းမေးခဲ့ကြသော မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းများ၊ ဘလော့ပရိသတ်များနှင့် ရေဒီယိုကျန်းမာရေးဆုတောင်းအစီအစဉ် (http://moemaka.com/?p=31358) ထုတ်လွှင့်ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြသော မိုးမခမီဒီယာအုပ်စုတို့အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ခင်မင်လေးစားစွာ ပြောကြားအပ်ပါသည်။
Wishing you healthy soon.i can notcall your mobile,takecare yourself,
While you were sick,I really prays for your health.Daily ,I have opened your News Blog,found out that,not working. I feel like,very inconvenient,because,don't know what to do,how to pass the time,and feel like my ears and eyes are closed.Very awkwardly,I have suffered.So, start counting the days,that you will become healthy,and can reopen your web.Thank you very much,now. Keep on rolling back, dear Doctor.I am glad for your quick recovery.Be healthy,and be allert.
လူသားတွေ အပြန်အလှန် မေတ္တာတရားတွေ ကူးလူးတုံ့ပြန်ကြတာကတော့ ကြည်နူးစိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။